'Desinfo एजेन्टहरु र एलियंस' VERSUS 'दुनिया मा वास्तविक समस्याहरु लाई संकेत गर्दछ र कार्रवाई मा आउछन्': मार्टिन Vrijland
'Desinfo एजेन्टहरु र एलियंस' VERSUS 'दुनिया मा वास्तविक समस्याहरु लाई संकेत गर्छन र कार्रवाई मा आउछ'
मा दायर [AIVD अलार्म], समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	30 जून 2017 मा	•7टिप्पणिहरु
यो आज 'म्याट्रिक्स' को बारेमा बोल्ने एक वास्तविक प्रवृत्ति हो। यसको बारेमा मेरो अन्तिम लेखमा मार्जेजेन भ्यान स्टेभेन मैले वर्णन गरे कि मेरो विचार डिन्निफो एजेंटहरूले जागिरको लागि सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो वन (तथाकथित) ज्ञान र सूचनामा प्रस्तुत गर्न र विदेशी हस्तक्षेपको लागि आशा राख्नको लागि। हामी के 'फोन म्याट्रिक्स' मार्फत विदेशी कथाहरु संग ब्लेंडर मा फेंकयो को वास्तविक विवरण र एक असंगत कहानी मा मिश्रित। मार्जीजैन व्यान स्वेभरन (जस्तै आफैलाई "नम्रता" भन्नुहुन्छ कि उनि गुरु हुन चाहँदैनन्, तर यसैले आफूलाई एक प्रकारको अख्तियारको लागि माथि उठाउँदछ)। मानिसहरूको दिमागमा यस्ता प्रकारका रोपनी विचारहरू जुन तिनीहरूसँग तथाकथित galactic संघहरूसँग सम्पर्क छ। मार्जेजन पनि भन्छ कि त्यो भविष्यबाट आउनेछ। तपाईं भन्नुहुन्छ: "कसले त्यो स्तम्भ निलो पार्छ?"ठीक छ, त्यहाँ झन्डै हजारहरू छन्। सम्भवतः सफलताको सूत्र आध्यात्मिक भेदभावमा छ र मानिसहरूको चाहना विशेष समूहको भाग हुन सक्छ। मार्जेजन व्यान स्टेभरन को सम्मोहन प्रविधिहरु लाई बाकी गर्छन।
मा फेसबुक पेज पृथ्वी मार्फत वेबसाइटबाट हामी निम्नलिखित [उद्धरण] "मार्टिज्न भ्यान स्टेभेनन भविष्यबाट 500.000 वर्षलाई सम्झछौं।" आफैलाई पढ्नुहोस्:
पहिले नै मेरो पछिल्लो दुई लेख मा Martijn वैन Staveren को बारे मा (हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ), मैले बताए कि त्यो कसरी विश्वसनीय रूपमा भर पर्न जान्छ। यसले स्पष्ट रूपमा धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ। उनीहरूले गम्भीर साईटहरूमा वर्णन गरेका शीर्षकहरू प्रयोग गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो विदेशी ब्लेंडरमा फ्याँकेर यो हाम्रो अनुकूल-दिमागिएको विदेशी दौडहरू र 'ग्यालेक्टिक फेडरेशन' र मनपराउन लिङ्क गर्न। मानिसहरु उहाँलाई गम्भीरतापूर्वक लाग्न सक्ने कारण यो तथ्यमा पाइन्छ कि उसले आफ्नो विदेशी मुठभेड र उनको अन्तरिक्ष यात्राको बारेमा विस्तृत कथाहरू राख्छ। उहाँ एक पटक आफ्नो यात्राको क्रममा एक पटक येशूलाई भेट्नुभयो (तल YouTube मा हेर्नुहोस्)।
संयोगमा, म पूर्णतया मानिन्छ कि त्यहाँ "विदेशी अनुभवहरू" भएका व्यक्तिहरू छन्। के यो प्रश्न सोध्न को लागी यो अधिक अर्थपूर्ण छैन कि यी अनुभवहरू कहाँ देखिन्छन्? के तपाईले खातामा लिन सक्नुहुनेछ (मेरो कम्प्यूटर सिमुलेशनको अनुमान लगाउँदै, मा उल्लेखित रूपमा यो लेख) यस्ता उपस्थितिहरू "खेलमा ल्याइएका" सजिलै हुन सक्छन्? के अनुभवहरूको परिणाम हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, मानसिकता वा 'एमके अल्ट्रा' -प्राभाविक तरिकाले? तर हामी पनि त्यस्ता परम्पराहरूमा 'राक्षस संस्थाहरू' को विचार र विकल्पलाई ध्यान दिनौं। म यस सन्दर्भमा 'लुसिफरियन हस्तक्षेप' शब्द प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। म आफैले केही व्यक्तिहरुलाई जान्छु जसले तिनीहरूको जीवनमा एलियन्सलाई हेर्ने दावी गर्दछ। म मान्दछु कि तिनीहरू निष्कपट छन्, तर यी आविष्कारहरूको जवाफ दिइन्छ: लूसिफरियन बल क्षेत्रमा लिनुहोस्। एक सिमुलेशन बिल्डरको जस्तै जस्तै खेलमा कुनै पनि इच्छित वस्तु 'सम्मिलित' गर्न सक्दछ, त्यसैले यस लूक्फेरेरिया म्याट्रिक्स (सिमुलेशन) को बिल्डर हुन सक्छ।
म व्यक्तिगत Martijn वैन Staveren धेरै सत्य म लेख्न विषयहरू द्वारा desinfo संग मिश्रित कि र उहाँले र धरती विषयहरूलाई को वेबसाइट प्रशासक, Arjan Bos, प्राय मेरो लेख को उपयोगी प्रयोग (र एकदम कमाउन) बनाउन म याद महसुस Crowd Power भिडियोहरूमा छलफल गर्नुहोस्। त्यो साँच्चै धेरै चाला हो (वा परिष्कृत: छान्नुहोस् र छान्नुहोस्)। आफ्नो चलचित्र मेरो पाठकहरूलाई पावर पठाइएका छन् विदेशी जंगल भीड किनभने म पनि खतरनाक अर्थमा लाग्छ, र म बस कटौती र मुद्दा जंगल (र समान desinfo) दूर गर्न बुझ्ने बनाउन मेरो सबैभन्दा गर्छन्। छोटो: मेरो विचार मार्जीजन र अर्गनले जंगलको डिन्न्फोफोन्च बनाउँदछ (सबैले आफ्नो विदेशी ब्लेंडरमा विदेशी कथामा लिङ्क गरेर)। बीचमा, पैसा प्रत्येक प्रदर्शनको लागि र हरेक डीभिडीका लागि सोधिएको छ, त्यसैले यसले धेरै पैसा कमाउँछ।
मेरो विचारमा, Martijn पनि मान्छेलाई म्याट्रिक्स बेवास्ता गर्न प्रोत्साहन दिँदै होइन, किनभने उनीहरूले उनलाई गलत ट्रयाकमा राख्छन् र ग्यालेक्सीटिक समर्थनको लागि आशा राख्दछन् (जसमा उहाँ मुखस्पेस छ)। म्याट्रिक्स बेवास्ता गर्नको लागि, तपाईंलाई म्याट्रिक्सको गलत / गलत छवि राख्नु पर्दैन। मैले झूटो जानकारी लुसिफरियन धोखाधडीसँग जान्छु, छोटो छोरो: एक सुरक्षा नेट। तपाईं शब्द 'मैट्रिक्स' प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाइँ यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्नुहुन्छ र यसलाई ठुलो पार्नुहोस्, तपाईले म्याट्रिक्सलाई सशक्त बनाउनुहुन्छ।
'पुष्टिहरू' मा सम्मोहन प्रविधिहरू मार्टिजेन भ्यान स्टेभेन लागू हुन्छ, मेरो विचारमा, पेन्टिकोस्टल चर्चमा पवित्र आत्मा संग पूर्णता को भ्रम को पीढी को रूप मा एक नै क्षमताको; यो एक राम्रो भावना प्रभाव दिन्छ, तर यो पनि (Luciferian) desinfo छ। तपाइँ केहि पनि पुष्टि गर्नुहुन्न। तपाईं केवल अनुमोदन को भ्रम को तल राख्नुहोस। तपाईं यस संसारमा उभिएर बलियो हुनुहोस्, झूटोलाई उजागर गरेर सत्य बोल्दै र देख्नुहुन्छ कि तपाईं एक शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईंलाई त्यो शक्तिको लागि कुनै पनि चालहरू छैन। तपाईं एक शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्छ; अमर र रचनात्मक। हामीसँग छ योद्धाहरू en हृदयको हृदय आवश्यक र गैर-अस्पष्ट प्रकारहरू जसले उनीहरूको हृदयमा भावनाको प्रभाव ("सशक्तिकरण") अनुभव गर्न प्रयास गर्दछ र यस बीचमा म्याट्रिक्समा नृत्य जारी राख्छ र दासको रूपमा बाँच्न जारी राख्छ। हामीले लुसिफरका एजेन्टहरूलाई पहिचान र बेवास्ता गर्नुपर्दछ। यो म के गर्छु र त्यसैले म मार्टिज र अर्गानलाई पनि उल्लेख गर्दछु (वैकल्पिक मीडिया देशहरु / एजेन्टहरूको सुरक्षा एजेन्सीको रूपमा)। यसैले म यस म्याट्रिक्स को गेट रखरखाव को नाम दिए: आर्यवाद; पावर संरचनाको तहमा पिरामिड जसमा आर्यवाद, रोम र गोप्य समाजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्.
तपाईंले सही तरिका मा म्याट्रिक्स को परिभाषित गर्नु पर्छ। मार्जेजन र अर्गनले आफ्नो विदेशी ब्लेंडरमा अवधारणा फेंक्यो। म्याट्रिक्सको सही परिभाषा जहाँसम्म मैले सम्बन्धित छ: फायरवॉल - सिमुलेशन हकीकत (हाम्रो 3D ब्रह्मांड) जसमा लुसिफर (एनकी) हाम्रो आत्मा जालिएको छ।। तपाईं यस बारेमा विस्तृत विवरण पाउनुहुनेछ यो लेख। विदेशी भ्रम भ्रम सुरक्षा जाल म्याट्रिक्स को भाग हो। "एलियन्सहरू" जुन वास्तवमा अवस्थित छन् राक्षसिक (लुसिफरियन) संस्थाहरू छन् जुन हामी पनि अनुनकी, आर्कोन्टेन, जेन आदिलाई बोलाइन्छौं। तिनीहरूले तपाईंलाई अस्तित्वको विचार (र केहि लागि पनि "प्रकट") विभिन्न विदेशी दौडहरूको मूर्खतालाई मूर्ख पार्छ। कम्प्युटर अनुकरणमा तपाईंले स्क्रिनमा सबै कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ। यस म्याट्रिक्स सिमुलेशनमा बिल्डर (लुसिफर) पनि गर्न सक्दछ। झूटा विदेशी एजेन्डामा फोकस (लुसिफर सिमुलेटेड विदेशी दौडहरू) गलत फोकस हो। हामीले यो म्याट्रिक्स बिल्डर र नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ: लुसिफर। हामीलाई म्याट्रिक्स बेवास्ता र मेटाउन आवश्यक छ।
वेबसाइट मेरो दृश्य धरती विषयहरूलाई (Arjan BOS) र WantToKnow (Guido Jonkers) जस्तै यो Martijn वैन Staveren प्रचार र भाषण दिन द्वारा अयोग्य छ। Arjan Bos फिलिमहरु (जो तपाईं एक शुल्क लागि धाउन सक्नुहुन्छ) र Martijn को लेक्चर आयोजना द्वारा Guido Jonkers गरे पनि आफ्नो वेबसाइटमा व्यक्ति बढाउन उत्पादन द्वारा घण्टा भीड पावर गरे। साथै, वेबसाइट WijWordenWakker र Marcel मार्सेल मेस्सिङ जस्तै जॉन कन्मेमुलर मार्जेजेन भ्यान स्टेभेननले हेल्सनसाउन्डमेंटबाट गम्भीरतापूर्वक लिईएको छ। प्रश्न सोध्नु भएको छ कि यो वेबसाइटहरू सबै AIVD द्वारा लेखा परीक्षण गरिएका छैनन्। किन बाटोमा राखिएको छैन र तिनीहरूले सबै आवश्यक वित्तीय र टेक्निकल स्रोतहरू हेर्छन्? यो ज्ञानमा म आफैलाई मेरो ठेगानामा धेरै लाइब्रेरी र निन्दा गर्न पाएको छु; मेरो दर्जा विरुद्ध दर्जन घृणित साइटहरू स्थापित भएका थिए र पृथ्वी माथिका, चाहनाका लागि सज्जनहरू र सज्जनहरूले आफ्ना सच्चा / कल्डर-ब्लन्डस्टेररीहरूसँग आफ्नो जेबलाई खुसीसाथ खुवाउँछन्। के त्यसो त मेरो भागमा रोटी चीड छ कि म यी सज्जनहरूको आलोचना गर्दछु? होइन, म मेरो पैसा कमान्डर कमाउन चाहान्छु, मैले अतीतमा उत्कृष्ट भएको छु। पैसा, तथापि, मेरो उद्देश्य होइन। यो सच्चाइको गम्भीर खोजीबाट होशियार झूटा र डिफिगरेसन अलग गर्न आवश्यक छ; गेहूंलाई छालाबाट अलग पार्दै। यो सोर्सिंग बुलशट बाट वैकल्पिक मिडिया सफा गर्न आवश्यक छ। मेरो उत्प्रेरणा एक सम्मोहन-विदेशी-स्नेहक मिश्रण बाहिर निस्किरहेका व्यक्तिहरूको विपरीतमा, वास्तविक जगेडा माथि हलचल हो।
मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन, भीड पावर र मार्टिन व्रिजल्याण्ड द्वारा देखी अनुमोदन
मार्टिज्न भ्यान स्टेभेनले आध्यात्मिक नीदरल्याण्डमा बढ्दो तारा
वैकल्पिक मीडिया मा कसरि इन्फ्लुल्टेंट्स एडिड शिपर्स ले कठोर 'भ्रमित व्यक्तियों'
डि-एज एजेंटहरू, सुरक्षा नेटहरू, मार्क पासियोियो र अन्य
AIVD नयाँ सयौं मानिसहरूको खोजी गर्दैछ
ट्याग: एजेन्टहरू, aivd, विकल्प, Arjan Bos, नियन्त्रणको विरोध, desinfo, पृथ्वीको विवाद, विशेष, नियन्त्रित, Guido Jonkers, मार्सल मेसिंग, मार्जेजेन भ्यान स्टेभेन, औसत, सुरक्षा नेट, सुरक्षा जालहरू, WantToKnow, हामी ब्यूँझनुहोस्
30 जून 2017 मा 18: 31
स्पष्ट रूपमा, मैले येशूसँग एक पूर्ण मजाकिया र पूर्णतया अविश्वसनीय मुठभेडको बारेमा रेकर्डिङ फेला पारे। उहाँ विशेष गरी शब्दहरू गोचेल (धेरै चोगमा) सँग राम्रो हुनुहुन्छ ताकि तपाईं मूलतः बेकारको बिचमा उभिएको छ। बेशक त्यहाँ एक्स्ट्राटररेस्टरील सभ्यताहरू छन्, निस्सन्देह हरेक मानव प्रबल हुन्छ र बेशक 3d एक होलोग्राम हो। गनम जान्छ कि मेरो पिछवाडेमा। केवल त्यो धेरै फरक राजस्व मोडेल छ ....
1 जुलाई 2017 मा 04: 45
सम्पूर्ण विदेशी एजेन्डा रकफेलर्स र साईटानिक हलिवुडको आर्थिक सहयोगको साथ सीआईएको निर्माण हो, यो बारेमा कर्बेट रिपोर्टको प्रकरण हेर्नुहोस्। निन्देहबाट स्वर्गको गेट पनि एमके अल्ट्रा अनुसन्धानको लागि यूएफओ-आधारित CIA-infused sect थियो।
त्यहाँ गम्भीर यो अर्थहीन लाग्न गर्ने अस्थिर मान्छे को जनता हो र सीआईए यस प्रकारको विशेष गरी disinformation एक माध्यम रूपमा अर्थहीन वैकल्पिक मिडिया consciously र बेहोश अवस्थामा गम्भीर सत्यवादी जानकारी मिश्रित छ।
1 जुलाई 2017 मा 08: 12
1 जुलाई 2017 मा 08: 15
1 जुलाई 2017 मा 08: 58
ठीक छ, 'भ्रामक' संग समस्या छ के रूप मा तिनीहरू मार्सर्स बोस र वान स्टेभरन को बकवास मा जान्छन्। मेरो विचारमा, तिनीहरू जो हो जसले नीदरल्याण्ड / उनीहरूको जीवन / राजनीतिको अवस्थासँग सन्तुष्ट हुदैनन्।
तर उनीहरूले नेदरल्यान्डमा प्रणाली बनाए राख्नेहरूलाई सामना गर्न डराउँछन्। यो तपाईंको नियोक्ता, अविश्वसनीय राजनेताहरू, तपाईसँग असहमत हुने सामाजिक परिवर्तनहरू आदि हुन सक्दछ। प्रायः यी भ्रामक व्यक्तिहरू सँग पनि सरकारसँग राम्रो काम छ। तिनीहरू टकराउ गर्न चाहँदैनन्, उनीहरूले राम्रो काम / सुरक्षा गुमाउँछन्, त्यसैले तिनीहरू भाग्न, लडाई वा उडान प्रतिक्रिया, तर श्री बोस्न र वान स्टेस्टेन जस्ता प्रकारका फलकहरूमा। असल विश्वासीहरू तथापि, अवसरवादी वा व्यावहारिक छन्, र यसैले स्थिति यथार्थ कायम राख्छन्।
2 जुलाई 2017 मा 11: 00
यदि यो सर्वोत्तम मान्छे भविष्य बाट यति टाढा आउँछ भने, त्यसपछि यसले उनलाई कसरी नि: शुल्क ऊर्जा उत्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर बताउन को लागी एक सानो प्रयास गर्नु पर्छ? वा अन्य वास्तविक सल्लाह। सख्त अस्पष्ट र बेकार शब्दहरूको सट्टामा तपाईसँग केहि पनि छैन।
मेरा मतलब अतीतमा एक व्यक्तिको रूपमा फिर्ता जान्छ भने, हामी केहि पनि स्थानान्तरण गर्न सक्छौं? तर पहिलेको अवधिमा मानिसहरू अहिले हामी धेरै छन्। वा हामी सबै समय समयमा एक समयमा कोर्स कहाँ अवस्थित अवस्थित छैन?
9 जुलाई 2017 मा 13: 29
मिसा कटका बारे हामी अब यो छैन ... मैले पहिले नै देखेको छु कि पर्याप्त यहाँ।
उनीहरूको यूट्युब अनुयायीहरूको संख्या धेरै कुरा गर्दैछ:
« मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन, भीड पावर र मार्टिन व्रिजल्याण्ड द्वारा देखी अनुमोदन
रोमी र सविना को मामला मीडिया कहानियों मा फंसिएको छ र असंभव "सबूत" »
कुल भ्रमण: 2.469.903
विल्फ्रेड बेकर op परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ
क्यामेरा2op तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?
Riffian op आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ